The Ab Presents Nepal » मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन ओली दिल्ली जाँदै!
मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन ओली दिल्ली जाँदै!
काठमाडौं: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज नयाँदिल्ली जाँदैछन् । ओलीले मोदीलाई प्रधानमन्त्री बनेकोमा बधाई र शुभकामना दिनेछन् भने भोली शुक्रबार बिहान दुई प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुनेछ ।
भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अत्याधिक बहुमत ल्याएपछि मोदी पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । मोदीसहित उनको मन्त्रीपरिषद्का सदस्यले पनि आजै राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट सपथग्रहण लिँदैछन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्यराष्ट्रका प्रमुखलाई सपथमा निम्त्याएका मोदीले यसपटक बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य मुलुकका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई सपथ ग्रहण समारोहमा निम्त्याएका हुन् ।